ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပသန္ဓေ္ဓတည်ခြင်းအကြောင်း - Hello Sayarwon
ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း၊ တနည်း ယခင်ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားနည်း လို့ သိခဲ့ကြတဲ့ In vitro fertilization (IVF) ဟာ မျိုးဆက်မပွားနိုင်ခြင်းအတွက် နာမည်ကြီးကုသနည်းဖြစ်တယ်။ လိုအပ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ သားဥများကို သုတ်ပိုးနဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ သားအောင်စေပြီး သန္ဓေသားလောင်း သို့ သန္ဓေ သားလောင်းများဖန်တီးခြင်းဖြစ်တယ်။ မိဘဖြစ်လိုသူတွေရဲ့ သားဥနဲ့သုက်ပိုးကိုသုံးနိုင်သလို၊ အမည်မဖော်သူအလှူရှင်တွေဆီကလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါတို့ကတော့ ဖန်ပြွန်သန္ဓေ္ဓသားမယူခင် သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။
သားအိမ်နံရံတစ်သျူးများပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ သားဥအိမ်ရောဂါများ၊ သားအိမ် သို့ သားဥပြွန်အနေအထားမကောင်းခြင်း၊ သုက်ပိုးနည်းခြင်း၊ သုက်ပိုးမှသားဥအားသားမဖောက်နိုင်ခြင်း၊ နှင့် အခြားသောမျိုးမပွားနိုင်သည့်အခြေအနေများရှိပါက ခန္ဓါကိုယ်ပြင်သန္ဓေ္ဓအောင်ခြင်းနည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အစပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးသွေးပြန်ကြောထဲသို့ ဟော်မုန်းကုထုံးထည့်ကာ သားဥအိတ်ထဲတွင် သားဥပေါင်းများစွာဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် ထိုသားဥများကိုစုပြီး ဖန်ပြွန်တစ်ခုထဲမှာ သန္ဓေ္ဓအောင်စေပါမယ်(ဒါကြောင့် ဖန်ပြွန်သန္ဓေ္ဓသား လို့ခေါ်ပါတယ်)။ သန္ဓေ္ဓသားလောင်းများပေါ်လာပါက သန္ဓေ္ဓသားလောင်းတစ်ယောက် သို့ သန္ဓေသားလောင်းများကို အမျိုးသမီးရဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း ကတဆင့် သားအိမ်ထဲ ရွှေ့ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
ထိုကုသနည်းရဲ့အောင်မြင်နိုင်ချေက အချက်အမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်တယ်၊ လုပ်ဆောင်ချက်အရည်အသွေး၊ မျိုးမပွားနိုင်ရခြင်းအကြောင်း၊ အမျိုးသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အသက် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ လုပ်ဆောင်မှုများထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ချေ ၆၆ ရာနှုန်းရှိပြီး ကလေးအဖက်တင်နိုင်သူကတော့ ၆၀ ရာနှုန်းရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ထိုနှုန်းဟာခံယူသူအမျိုးသမီးက ၃၅ နှစ်အောက်ဖြစ်သင့်ပြီး အသက် ၃၀ အထက်အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ အသက်အလိုက် ကလေးအဖက်တင်နိုင်ချေတဖြေးဖြေးနည်းသွားပါတယ်။
မိခင်ဝမ်းထဲကို သားဖောက်ထားတဲ့ သန္ဓေ္ဓသားလောင်းများများထည့်လေလေ ကလေးရနိုင်ချေ ပိုအောင်မြင်နိုင်လေလေဆိုပေမယ့် အမွှာများလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပြီး မိခင်ရော၊ ကလေးများပါအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါ များနေတဲ့ သန္ဓေ္ဓသားအရေအတွက်ကို လျှော့ပစ်ဖို့လိုလာနိုင်တယ်၊ ထိုသို့လျှော့ပစ်ခြင်းက ကျင့်ဝတ်အရရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ ထိခိုက်ရစေတာကြောင့် တချို့မိဘတွေကတော့ သန္ဓေ္ဓသားလောင်းလေးတစ်ယောက်သာ ဝမ်းတွင်းထည့်ကြပါတယ်။ ထိုအခါ ဖန်ပြွန်ထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ သန္ဓေ္ဓသားလောင်းများကို နောက်ပိုင်းအသုံးပြုရန် သို့ တခြားသောမိဘဖြစ်လိုသူများကိုလှူရန်အတွက် အေးခဲသိမ်းဆည်းထားလေ့ရှိတယ်။
ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ နေရာ၊ ဆေးဝါး နဲ့ သင့်ရဲ့အာမခံဥပဒေပေါ် မူတည်နိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုခံယူအပြီးမှာ အနည်းငယ်ဗိုက်နာခြင်း၊ ဗိုက်ပွခြင်း ဖောင်းခြင်းနဲ့ အရည်ကြည်သို့ သွေးစအနည်းငယ် ဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးဆင်းမယ်၊ ဆီးခုံအောင့်မယ်၊ ဆီးတွင်းသွေးပါမယ် အဖျားကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်အမြန်ဆုံးပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပသန္ဓေ္ဓအောင်ခြင်းနည်းဟာ မျိုးမပွားနိုင်သူစုံတွဲများ တခြားသောဆေးဝါးကုသမှု၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုနဲ့ သုတ်ပိုးထည့်သွင်းခြင်းနည်းများမအောင်မြင်မှ သုံးသင့်ပါတယ်။ IVF နည်းဟာ ကလေးရယူနိုင်ရန်အာနိသင်အရှိဆုံးနည်းဖြစ်သော်လည်း အချိန်ကြာသလို၊ ကုန်ကျစရိတ်လည်းများပါတယ်။ IVF နည်းဟာ အများအားဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့မအောင်မြင်နိုင်တာကြောင့် မခံယူမီ သင့်ဆရာဝန်နဲ့သေချာတိုင်ပင်ကာ သင့်ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်အားလုံးကိုသိရှိပြီးမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာပါပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
Infertility and In Vitro Fertilization. http://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/guide/in-vitro-fertilization. Accessed August 18, 2016.
In vitro fertilization (IVF). http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/in-vitro-fertilization/home/ovc-20206838. Accessed August 18, 2016.
IVF Success Rates: In Vitro Fertilization Statistics. http://www.advancedfertility.com/ivf-success-rates.htm. Accessed August 18, 2016.
သန္ဓေအောင်ခြင်း၏ လက္ခဏာ ၅ ချက်